Furida xisbiyada iyo Distoorka Somaliland
Home QORMOOYIN Furida xisbiyada iyo Distoorka Somaliland
Waxaynu la soconaa. Inay labada gole ee Somaliland ay ansixiyeen in la furo xisbiyo cusub iyadoo mudadii 10ka sano ay dhowday, hadaba waxa iisweydin leh goormaa la furayaa? Sidee loo tartamayaa hadii doorashooyinkii la qabtay? Miyay furida xizbiyadu kasoo horaynaysaa doorashada jagada madaxweynaha mise wey ka dambaynaysaa?. Waxaasoo dhami waa su,aalo jawaab u baahan oo laga rabo inay golayaasha iyo xukuumadu ay qeexaan.
Dhinaca kale waxa jirta inuu distoorka Somaliland diidanyay in xizbiyada koota loogu xidho sadex xizbi taasoo aynu aragnay dhibaatada ay keentay sadex nin oo siyaasadii dalka koto ugu xidhantay!
Waxa distoorka ku qoran inu “ qofwalba uu wax doorankaro isagana la doorankaro” Taa macnaheedu waa inuu qofku isago xizbi ka socda iyo isagoo madaxbanaan uu doorashada ka qaybgelikaro.Taasina waxay adkaynaysaa nidaamka dimoqraadiga oo aan kasoo qaadanay reer galbeedka oo runtii isku dheelitiran sida dalka Maraykanka oo aan isku mid ka nahay.
Runtii waxay ku haboonayd in xizbiyada la furo ka hor intii aan la qaban doorashadii golayaasha si ururadu ugu tartamaan kuraasta golayaasha ugana soo baxaan labada xizbi ee ugu sareeyaa.
Iminkana la garanmaayo sida xaalku noqondoono laakiin waxa waajib ah in culays lagu saaro golayaasha dowlada in la furo xizbiyada si looga baxo xaalada siyaadadeed ee cakiran oo albaabka loo furo dhiig cusubi inuu kusoo biiro hogaaminta dalka oo Somaliland kala dabaasha cidhiidiga iyo go’doonka ay ku jirto.
Previous articleXukuumadda oo ka hadashay muranka shaqaalaha Madaarka Berbera
Next articleShaqaale Qadiyadda Somaliland loogu dhibaateeyey Muqdisho oo Hargeysa lagu soo dhaweeyey